at 11:12 PM Labels: အကြော်အလှော်
ကြက်ကြော်အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ကြက်သား ရင်ပုံသား သို့မဟုတ် ပေါင်သား ၁ ကီလို၊ စပါးလင် ၅ ပင်၊ ချင်း လက်သုံးဆစ်၊ ပဒဲကော လက်သုံးဆစ်၊ နံနံစေ့ အနည်းငယ်၊ နနွင်းတက် (အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့ နနွင်းမှုန့်အစား နနွင်းတက်အစိမ်းကိုသုံးပါတယ်နော်) လက်သုံးဆစ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၁၀ မွှာ၊ ရှောက်ရွက်၊ ဆားအနည်းငယ်နဲ့ ဆီတို့ပါနော်။
ကြက်သားကို သန့်စင်အောင် ရေနဲ့ ဆေးကြောပေးထားပါနော်။ အခြားသော အဆာပလာများဖြစ်တဲ့ စပါးလင်၊ ချင်း၊ ပဒဲကော၊ နံနံစေ့၊ နနွင်းတက်၊ ကြက်သွန်ဖြူတို့ကို သန့်စင်အောင် ဆေးကြော၊ အခွံနွှာပေးထားပါ။ ပြီးရင် အဆာပလာအားလုံးနဲ့အတူ ရေ လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးခန့်ရယ် ဆားရယ်ကိုထည့်ပြီး ဘလင်ဒါ ကြိတ်စက်ထဲ ထည့်ပြီး ကြိတ်ပါတယ်နော်။ အားလုံးညက်ပြီဆိုရင်တော့ ကြက်သားထဲ အဲ့ဒီအရည်တွေ အကုန်လုံးကိုထည့်ပြီး အနည်းဆုံး နာရီဝက်ကနေ တစ်နာရီလောက် နှပ်ပေးထားပါနော်။
နှပ်ထားတဲ့ ကြက်သားတွေရယ်၊ ရှောက်ရွက်ရယ်ကို အိုးတစ်လုံးထဲထည့်ပြီး ရေခမ်းအောင် မီးအသင့်တင့်နဲ့ တည်ပါတယ်နော်။ ရေခမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့ ကြက်သားကို အအေးခံပေးပါနော်။ တကယ်လို့ ရေရှည်အတွက် ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခါတည်းနဲ့ ကြက်သား ငါးကီလိုလောက် ၀ယ်ပြီးတော့ အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နည်းအတိုင်း လုပ်ပြီး အအေးခံ၊ ပြီးတော့မှ ပလတ်စတစ်အိတ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဗူးလေးထဲ ထည့်ပြီး freezer ထဲထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ အချိန်မေ ရွးကြော်စားလို့ ရပါတယ်နော်။
ကြော်ဖို့ကတော့ မီးဖိုပေါ် ဒယ်အိုးတင် ဆီထည့်၊ ဆီပူလာရင်တော့ ကြက်သားတွေ ထည့်ပြီး မီးအသင့်အတင့်နဲ့ မှန်မှန်လေး ကြော်ပေးလိုက်ရုံပါပဲနော်။ အကျက်ညီအောင် ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးပြီး ကြော်ပေးပါနော်။ အဆာပလာအဖတ်လေးတွေကလည်း အညိုရောင်လေးဖြစ်ပြီး အနံ့လေးကတော့ မွှေးကြိုင်နေတာပဲနော်။ အကျက်ညီသွားပြီဆိုရင်တော့ ကြက်သားလေးတွေကိုဆယ်၊ အဆာပလာ အကျွတ်ကြော်လေးတွေလည်း ဆယ်ယူပြီး ထမင်းဖြူပူပူလေးနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါတယ်နော်။
ကြွတ်ရွမွှေးကြိုင်နေတဲ့ကြက်ကြော်လေးရယ်၊ sembel လို့ သူတို့ခေါ်ကြတဲ့ ငရုတ်သီးထောင်းရယ်၊ အသီးအရွက်မျိုးစုံတို့စရာရယ်၊ ထမင်းဖြူပူပူလေးရယ်နဲ့တွဲဖက်စားသုံး ကြပါတယ်နော်။
မောင်နှမများအားလုံးအတွက်လည်း ဟင်းလျာတစ်မျိုးတိုးပြီး စားမြိန်စေဖို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်။
subuueain April 1, 2010 at 8:06 AM
မမလုရေ sembel လို့ခေါ်တဲ့ ငရုတ်သီးထောင်း ဘယ်လိုထောင်းတာလည်း မေးပေးပါလားဟင်။ အင်ဒိုနီးရှား ငရုတ်သီးထောင်းအရမ်းကြိုက်တယ်။ မမလုပြန်ရေးပေးပါနော်။ အားတဲ့အချိန်ကျရင်ပေါ့။
ကိုမျိုး (အညာမြေ) April 1, 2010 at 12:45 PM
အင်း.. အင်ဒိုနီးရှား စတိုင် ကြက်ကြော်မွှေးမွှေးလေးကတော့ ထမင်းဆီဆမ်းနဲ့ အလိုက်ဆုံးဘဲ။ စင်ကာပူမှာလဲ ဒီကြက်ကြော်က ဈေးကြီးတယ်ဗျ။ ခဏခဏ စားဖြစ်တယ်။
စူးနှယျလေး April 1, 2010 at 3:30 PM
sambal လည်း ကြိုက်တယ်..ပူလွန်းလို့ နည်းနည်းပဲစားနိုင်တယ် :)
Evy April 1, 2010 at 8:57 PM
Anonymous April 1, 2010 at 9:47 PM
does it need to be deep fried inalot of oil or shallow fry with little oil till it turns sort of brownish color outside. Thanks.
Shinlay April 2, 2010 at 12:41 AM
ကျေးဇူးပါလုရေ။ အိမ်ကို ဦးပဉ္ဖင်းကြွရင်ချက်ကျွေးဖို့ နည်းတစ်နည်းရပြီး။
ချစ်ကြည်အေး April 2, 2010 at 8:22 AM
ညီမ လုလုရေ...အမက အဲလို အခြောက်တိုက်လေးတွေ နဲ့ ထမင်းပူပူလေး စားရတာကို ကြိုက်တယ်...ကြော်စားကြည့်အုံးမယ်...
လသာည April 2, 2010 at 10:13 PM
ပုံလေးမြင်ရုံနဲ့တင် အနံ့မွှေးလာသလို့ပဲ။ ဗိုက်ဆာလာပြီ။ တို့ကလေ ကြက်သားကို အစာပလာနဲ့ မနှပ်ပဲနဲ့ ဒီအတိုင်း ကြော်ကြော်စားနေတာ။
လုလု.. ကျေးဇူးနော်။ ဒါလေးလည်း ကူးသွားပြီ။ မနက်ဖြန် ကြော်စားမယ်
PAUK April 3, 2010 at 5:41 AM
SHWE ZIN U April 3, 2010 at 12:46 PM
ကြက်ကြော် မွှေးမွှေးလေး စားသွားတယ် ညီမလုရေ